इटहरीका चार चर्चित | www.itaharifm.com.np
गृहपृष्ठ » चर्चाका चार » इटहरीका चार चर्चित
इटहरीका चार चर्चित
Posted by Itahari Fm | error | ४६६ पटक
चर्चाका चार हामी हरेक महिना प्रस्तुत गर्छौँ । इटहरीसँग सरोकार राख्ने बिषय र त्यससँग जोडिएर चर्चामा आएका चर्चित मध्येका चार व्यक्तिहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । विभिन्न सञ्चार मध्यममा आएका समाचार, विश्लेषण अनि सार्वजनिक स्थल, कार्यक्रममा हुने छलफल तथा बहसका आधारमा इटहरी एफ.एमको समाचार टिमले चर्चित व्यक्तिहरुको छनौट गर्छ ।यो महिना पनि विभिन्न घटना तथा परिघटनाहरु चर्चामा आए । ति घटनाहरुमा विभिन्न व्यक्तिहरु जोडिएर चर्चित भएर बजारमा छाए । फागुन महिनाभर चर्चामा आएका विषय मध्येबाट बढि चर्चामा आएका व्यक्तिहरुलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।
नजिकिदै गरेको उद्योग बाणिज्य संघ इटहरीको चुनावका कारण इटहरीका केही व्यवसायी चर्चामा छन । यी चर्चीत मध्येका व्यवसायी हुन भिम पौडेल । उनलाई उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको अध्यक्षको प्रमुख दावेदारको रुपमा हेरिएको छ । उनी नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा उम्मेद्वार बन्न लागेको चर्चा छ । इटहरी उद्योग बाणिज्य संघको नयाँ भवनको जग बसाउने भिम पौडेल यस अघि ३ पटक चुनाव लड्दा लगातार ३ पटक नै जित निकाल्न सफल छन् । पौडेलको नाममा सर्वसम्मत गर्न एउटा समुह जोडबलमा पनि छ । तर त्यो सम्भावना कमै छ । अघिल्लो पटक काँग्रेसी व्यवसायीकै कारण गुमेको सत्ता पौडेल फिर्ता ल्याउने प्रयत्नमा छन् । पौडेलको यो चुनाव प्रतिष्ठाको हुनेछ । जसमा उनी जसरी पनि चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरतमा छन् । व्यवसायीहरु वीचमा राम्रो सम्बन्ध भएका पौडलेका सबल तथा कमजोर पक्ष पनि छन् । इटहरी आसपासमा रहेर ठुलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने व्यवसायी भएकाले युवा र पुराना दुवै व्यवसायीको सेन्टीमेन्ट उनको पक्षमा छ । इटहरी जेसिजको अध्यक्ष रहेका छोरा विनोद पौडेलले युवा व्यवसायीहरुको भोट तान्न सक्नेछन् । उनी युवा उद्योगीको मञ्च बनाएर त्यसको पनि उपाध्यक्ष छन । उद्योगी व्यवासायीसँग राम्रो छवी बनाएका पौडेल व्यवसायीक गतिवधिमा खासै विवादमा मुछिएका पनि छैनन् । इटहरीमा काँग्रेस निटक व्यवसायीहरु धेरै भएकाले पनि सबैको भोट उनलाई आउने हो भने उनी जित हाँसिल गर्न सक्छन् । पैसा खर्च गरेर भए पनि पौडेलले चुनाव जित्छन् भन्ने चर्चा पनि बजारमा छाएको छ । विशेष गरी ढुंगा गिटीको कारोबारलाई लिएर उनको गलत प्रचार हुन सक्छ । अर्को तर्फ उनी सामान्य व्यापारीहरुको सहज पहुँचमा छैनन् भन्ने तर्कहरु पनि छन् । यी कमजोरीलाई पन्छाएर पौडेल चुनावमा कसरी उत्रने हुन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
उद्योग बाणज्य संघ इटहरीको चुनावकै सन्र्दभमा चर्चाका आएका अर्का व्यवसायी हुन शैलेस बिष्ट । अघिल्लो चुनावमा सर्वाधिक भोट सहित बाणिज्य तर्फको सदस्यमा निर्वाचित भएर उनी बरिष्ठ उपाध्यक्षमा मनोनीत भएका थिए । पछि अध्यक्ष लिलम बस्नेत माननीय भएपछि उनी कार्यवाहक अध्यक्ष भएर नै काम गरि रहेकाछन । सदस्यमा निर्वाचित भएर करिब करिब पुरै कार्यकाल अध्यक्षको भुमीका पाउने भाग्यमानी शैलेस आउदो चुनावमा नेकपाको सर्मथनमा अध्यक्षको दावेदार देखिएका छन् । साना ठुला सबै व्यवसायीसँग पहँुच भएको, हसिलो मिलनसार व्यवसायीको परिचय बनाएका शैलेसको बिषयमा बजारमा राम्रा नराम्रा चर्चा पनि हुने गर्छन । एक पटक त बजार हल्लाकै बिषयमा पार्टी बैठकमा समेत छलफल भएको समेत चर्चा थियो । जे होस सत्रुलाई पनि सजिलै साथी बनाउने शैलेस उद्योग बाणिज्य संघ इटहरीको अध्यक्षको दाबेदारको रुपमा प्रस्तुत भएका छन । राजनितिक परिवारका शैलेस इटहरी जेसिजको अध्यक्ष भैसकेका र सामाजीक काममा अगाडी देखिने व्यक्तिमा पर्छन । बजारमा नकारात्मक हल्ला त चल्छ नै अघिल्लो चुनावमा गरेका प्रतिवद्दता पुरा गर्न नसक्नु उनको ठुलो कमजोरी छ । अध्यक्षकै भुमीकामा एक कार्यकाल काम गर्दा त्यस्तो उच्चतम काम नदेखिएकाले शैलेसका अगाडी चुनौतीको पहाड छ । हाल पनि कार्यकारी अध्यक्षकै भुमिकामा रहेका शैलेसले व्यवसायीको पक्षमा काम गर्न नसकेको, व्यवसायीहरु शनिबार र विहिबार बजार बन्द भन्दै दुई पक्षमा हुँदा समस्या समाधान गर्न नसकेको अझ बढाएर लगेको, वस्तुगत संघहरुले गर्ने कार्यक्रममै रमाएर उद्योग वाणिज्य संघलाई सुस्त बनाएको जस्ता आरोप लाग्ने गरेको छ । कमजोर पक्ष हुँदाहुँदै पनि उनका सबल पक्ष पनि छन् । २ पटक वाणिज्य तर्फबाट अत्याधिक मतका साथ चुनाव जित्नु, सबै व्यवसायीहरुसँग सहज पहुँचमा हुनु, व्यवसायीले खोजेको बेला उपलब्ध हुनु जस्ता राम्रो पक्ष छन् । आफ्नो गिर्दो साख शैलेसले जोगाउने हुन या अझ पछि पर्ने हुन त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
राजिव ढुंगाना, इटहरीमा चिरपरिचित नाम हो । अहिले ढुंगाना इटहरीमा मात्रै नभएर देशमै चर्चामा छन् । नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रिय समिति विगठन भएपछि नयाँ नेतृत्वका लागि उनको चर्चा छ । लामो समय देखी नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघको राजनिति गर्दै आएका ढुंगानालाई अध्यक्षको प्रमुख दावेदारका रुपमा लिइएको छ । पाटि सभापति शेरबहादुर देउवा जसरी पनि आफु निकटलाई नै नेविसंघको नेतृत्व सुम्पने दाउमा छन् । देउवा गुटको भित्रियाको रुपमा चिनिएका ढुंगानालाई तल्लो तह देखी माथिल्लो तह सम्मको साथ र सर्पोट रहेको बजारमा चर्चा छ ।
नेविसंघ भित्रको आन्तरिक किचलो भित्र भित्रै मात्रै नभएर बाहिर सडकमै छताछुल्ल पोखिसकिएको छ । नेतृत्व चयन नहुँदा दैनिक रुपमा नेविंसघका युवाहरु पाटि कार्यलय अगाडि नाराबाजी, धर्ना गर्छन् । त्यति मात्रै नभएर गुट गुट वीच कुटाकुट र ढुंगा हानाहान गर्दै रमिता देखाईरहेका छन् । बाहिर देखि रहेका यस्ता दृष्यका पछाडि शिर्ष नेताको आ आफ्नै रणनिति रहेको बजारमा चर्चा छ । हुन त पौडेल समुहबाट दिपक भट्टराई, मनोजमणि आचार्य र सिटौला पक्षबाट कुन्दन काफ्ले, युवराज पाण्डेले नेतृत्वमा दावी गरिरहेका छन् ।
नेतृत्व दावी गर्ने रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षलाई थकाउने, न थाके थर्काउने रणनितिमा पाटि सभापति रहेको पनि बजारमा चर्चा छ । हुन त सभापतिले थर्काएरै पाटि चलाईरहेका छन् । नेविसंघको नेतृत्व पनि थकाएरै टुंगोमा पुर्याउने केही शिर्ष नेताहरु बताउँछन् । देउवा गुटका पहिलो नम्बरमा ढुंगाना नै रहेको र उनी नै अध्यक्ष हुने, उनी निकटका शिर्ष नेताहरुले बताउँने गरेका छन् । देउवा पछिका दोस्रो तहका शिर्ष नेतासँग ढुंगानाको राम्रो सम्बन्ध छ । उपसभापति विमलेन्द्र निधि, सहमहामन्त्रि प्रकाशरण महतसँग उनको राम्रो सम्बन्ध छ । उनीहरुले पनि ढुंगानालाई मौखिक निर्णय दिईसकेको इटहरीमा चर्चा छ । यता, सुनसरीकै पुराना काँग्रेसका हस्ती तथा उपसभापति विजय गच्छदारले पनि राजिवलाई नै समर्थन गरेको चर्चा छ । सुनसरीमा लामो समय देखी काँग्रेसको राजनिति गर्दै आएका राजिव हाल सम्म अवसर नपाएका नेता मध्येमा पर्छन् । उनीसँगैका र उनीपछि आएका नेताहरु सांसद र मन्त्रि भईसके । तर राजिवले कुनै अवसर नपाएको काँग्रेस भित्रै चर्चा हुने गरेको छ । विगतमा पनि सुनसरीबाट मेयर, प्रदेश तथा संघिय संसदका लागि टिकट बाँड्दा राजिव पछि परे । त्यसैले पनि उनलाई न्याय गर्न पनि नेविसंघको अध्यक्ष दिनै पर्ने इटहरी र सुनसरी काँग्रेसको माग रहेको बजारमा चर्चा छ । काँग्रेसी जनहरु के पनि भन्छन् भने यो पटक पनि ढुंगाना पछि परे भने, यस्तो अवसर फेरी आउँदैन । ढुंगाना पनि नेताहरु भेटघाटमा व्यस्त छन् । काठमाण्डौँमै बसेर नेताहरुलाई भनसुन गरिरहेका छन् । आज हुने, भोलि हुने, पर्सि निर्णय हुने भन्दै काँग्रेसले निर्णय पर सारिरहेको छ । कहिले झर्ला र खाँउला भनेर पर्खेर बसेका ढुंगानालाई मानसिक छटपटाहट चाँही पक्कै धेरै भएको हुनुपर्छ । तर जे होस् उनको दावेदारी कडै छ । प्रतिक्षाको घडि अन्त्य गर्दै ढुंगाना नै नेतृत्वमा पुग्ने हुन वा यो पटक पनि चर्चामै सिमित हुने हुन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
उदयमानी शहर इटहरीको सुरक्षा सम्हाल्न आएका छन् डिएसपी समिरचन्द्र खरेल । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको कमाण्ड सम्हाल्न डिएसपी खरेल आएसँगै चर्चामा छन् । उनले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै नयाँ सिंघम भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनलाई उपनाम दिईएको छ । मद्रासि फिल्मको हिरोको जस्तै जुँगा पालेका उनी अहिले इटहरीमा चर्चित बनेका छन् । यस अघि इटहरीमा डिएसपी विनोद शर्मालाई पनि सिंघमको उपनाम दिईएको थियो । उपनाम जस्तै डिएसपी शर्माले इटहरीमा तहल्कै मच्चाएर गए । उनको अहिले पनि इटहरीमा चर्चा हुनेगर्छ । नयाँ आएका डिएसपी खरेल जुँगा मात्रैका सिंघम हुन वा फिल्मी हिरो जस्तै सुरक्षामा तहल्का मच्चाउने हुन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
इटहरी आएपछि डिएसपी खरेलले गुण्डागर्दीमा सम्झौता नगर्ने उद्घोष गरेका छन् । उनले यस्तो उद्घोष गरेपछि सञ्चार माध्यमले उनलाई प्राथमिकता दिँदै सम्प्रेरण गरे । हुन त भर्खरै गएका डिएसपी शिव श्रेष्ठले पनि आउने वित्तिकै गुण्डागर्दी साम्य पार्ने बताएका थिए । सिजन गुरुगंलाई पक्रेर उनले आफ्नो प्रभाव देखाउन खोजे । तर उनको त्यो कार्य ब्याकफर्वाड भईदियो । राजनितिकको भुँग्रोमा उनी फसे । वा फँसाईयो । पछि विभिन्न समयमा विवादमा तानिए पनि । जाँदा जाँदै डिएसपी शिव श्रेष्ठले केही खुलासा गर्दै गए । इटहरीका सम्भ्रान्त वर्गका मानिसहरु ब्राउन सुगर प्रयोग गर्छन भन्दै इटहरी लागुऔषधको जालोमा फस्दै गएको उजागर गरिदिए । अर्को तर्फ केही सञ्चार माध्यम मार्फत इटहरी ठगहरुको शहर बन्दैछ भनेर पनि भन्दिए । यी दुई विषयले भर्खरै आएका डिएसपी खरेलको काँधमा थप जिम्मेवारी थपिएको हुनुपर्छ । के इटहरी साँच्चै ठगहरु बस्ने शहर बन्दै छ ? वा त्यो कुरा असत्य हो ? यदि साँच्चै इटहरीमा ठगहरु ग्यालग्यालती छन् भने त्यो सफा गर्ने जिम्मेवारी उहाँको । अनि लागुऔषधको जालोमा फँसेको इटहरीको सम्भ्रान्त वर्गलाई सार्वजनिक गर्दै सुधार गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईकै । यस्तै अपराध र अपराधिलाई निमिट्यान्न पार्दै गर्दा तपाईलाई दिईएको सिंघम उपनामको सार्थकता हुनेछ । होईन भने जुँगा मात्रै त फिल्मको हिरोले मात्रै होइन गुण्डाले पनि पाल्छ । यी सवै हेर्न त पर्खनै पर्छ । तर जे भएपनि नयाँ ठाउँमा तपाईलाई स्वागत छ, अनि कार्य सफलताको शुभकामना ।।